अनौठो Archives - SAMACHAR SANJAL
अब दुइ ओटी विवाह गर्नेलाई भत्ता दिने घोषणा
एजेन्सी। हाम्रो देशमा बहुविवाह गर्नु कानुनी रुपमा अपराध हो । नेपाल मात्र होइन संसारका अधिका.श देशमा बहुविवाह गर्न पाइँदैन । तर, संसारमा यस्ता देश पनि छन् जहाँ बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गरिन्छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि यस्तै देश हो जहाँ सरकारले दुई श्रीमती भएकाहरुलाई अतिरिक्त भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । खलीज टाइम्सका अनुसार देशमा अविवाहित युवतीको बढ्दो संख्यालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले दोस्रो विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । बुधबार यहाँको संसदमा यसको घोषणा गरिएको हो । यहाँ अब दुई श्रीमती राख्नेहरुले शेख जायद हाउजिङ कार्यक्रम अन्तर्गत…
तलब धेरै भएको भन्दै चिकित्सक विरोधमा !!! (एक पटक हेर्नुहोस )!!!
काठमाण्डौं । आफूहरुलाई दिइएको तलब सुविधा बढि भएको भन्दै क्यानडाका पाँच सय भन्दा धेरै चिकित्सकले विरोध गरेका छन् । चिकित्सकहरुले एक विरोध पत्रमा सामुहिक रुपमा हस्ताक्षर गर्दै आफूहरुलाई दिइएको सुविधा धेरै भएको बताएका हुन् । आफू भन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा नर्सले काम अनुसार पारिश्रमिक नपाएको तर आफूहरुलाई भने आवश्यकता भन्दा धेरै तलब दिइएको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले विरामीले पाउनुपर्ने सुविधा पनि नपाइरहेको अवस्थामा चिकित्सकको तलब बढ्नु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् । साथै उनीहरुले आफूहरुको वृद्धि गरिएको तलब कटौति गर्न पनि माग गरेका छन् । चिकित्सकहरुले पत्रमा भनेका छन्,…
फेरी पर्दामा देखिदैँ श्रीदेवी, बोनी कपूरले गर्दैछन् यस्तो चमत्कार
फेरी पर्दामा देखिदैँ श्रीदेवी, बोनी कपूरले गर्दैछन् यस्तो चमत्कार भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवीको मृत्युपछि उनको परिवारलाई शोकबाट निस्कन एकदमै गाह्रो छ । जबकी उनको पति बोनी कपूरले छोरी जान्वी कपूरको २१औँ जन्मदिनलाई श्रीदेवीले चाहेजसरी नै मनाउनको लागि सक्दा प्रयास गरे । अब भने भारतीय मिडियामा बोनी कपूरले श्रीदेवीको जीन्दगीको बारेमा डकुमेन्ट्री बनाउने खबर छापिएको छ । भारतीय संचारमाध्यमा छापिएको रिपोर्टका अनुसार बोनी कपूर यो बिषयमा बिचार गरीरहेका छन् । यो डकुमेन्ट्रीमा श्रीदेवीको बास्तविक आवाजको प्रयोग गरिने छ । यसको साथमा श्रीदेवीको केहि भिडियोहरु पनि उक्त डकुमेन्ट्रीमा समावेश गरिने छ । बोनीले…
किन भाइरल बने कालोपाटीमा कम्प्युटर प्रविधि पढाउने शिक्षक ?
घानाका एक शिक्षकले कम्प्युटर विना नै कम्प्युटर प्रविधि पढाएको विषय अनलाइनमा चर्चित बनेको छ। कुमासीका ती शिक्षकले माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्रामको चित्र निकै मिहिन रूपमा ‘ब्ल्याकबोर्ड’मा बनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तस्बिरसहित एउटा स्टेटस लेखेर ती शिक्षकले लेखेका छन्, “घानामा सूचना तथा कम्प्युटर प्रविधि पढाउनु निकै रमाइलो छ।” उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा आएपछि त्यसलाई हजारौंपटक शेअर गरिएको छ। माइक्रोसफ्ट कम्पनीले त्यसपछि उक्त विद्यालयमा कम्प्युटर सामाग्रीहरू पठाउने पठाउने बाचा गरेको छ। ओउरा क्वाजो उपनाम रहेका उनले आफ्नो फेसबुक सन्देशमा लेखेका छन्, “म मेरा विद्यार्थीलाई माया गर्छु त्यसैले म जे पढाइरहेको छु त्यो…
जस्लाई धेरै ह्याण्डसम भए कै कारण देश निकाला गरियो… हेर्नुहोस फोटो
के ह्याण्डसम हुनु अपराध हो ? यस्तो होइन भने दुवईमा बस्दै आइरहेका एक युवकले किन सजाय पाए ? के तपाईलाई थाहा छ ह्याण्डसम भएकै कारण यी युवकले देश छाड्नु पर्यो छ ? दुबईका बेस्ट मोडल, एक्टर, फेशन फोटोग्राफर र लेखक उमर बोरकान अल गालालाई उनको स्मार्टनेसका कारण देश छोड्नु पर्ने सजाय मिलेको छ । वन इण्डिडाका अनुसार उमर विश्वको टप मोडलको सुचीमा उनी छैठौ नम्बरमा रहेका छन् । तर, उनको यो उपलब्धि उनलाई अभिशाप बन्यो । २९ वर्षिय यी मोडलका फिमल फलोअर्स धेरै रहेका छन् । दुवईको लोकल मिडियाले दिएको…
OMG- कस्तो अचम्म खानेपानीको धाराबाट रगत आउन थाल्यो
फागुन, बनेपा । तीन दिन भयो बनेपामा खोनपानी संस्थानले वितरण गर्ने पानीको धारामा रगत आउन थालेको छ । बनेपा-८ र ९ स्थित दक्षु टोल, कसाई टोल र पुरानो बजारमा वितरण भएको पानीमा लगातार रगत र गनाउने ढल आउन थालेको हो । खानेपानीको धारामा रगत र ढल आउन थालेपछि स्थानीयबासीले मंगलबार बनेपा नगरपालिका पुगेर उजुरी नै गरेका छन् । ‘हामीले पिउने पानीमा कि ढल आउँछ कि आउँछ’ बनेपा ९ कि लक्ष्मी प्रजापतिले भनिन् । दक्षु टोलका कृष्णबहादुर शाहीले खानेपानी संस्थान र नगरपालिका जिम्मेवार नबनेको गुनासो गरेका छन् कसरी आयो धारामा रगत…
महजोडीले १ लाखको पुरस्कार किन फिर्ता गरे ||
महजोडीले १ लाखको पुरस्कार किन फिर्ता गरे ||महजोडीले १ लाखको पुरस्कार किन फिर्ता गरे ||महजोडीले १ लाखको पुरस्कार किन फिर्ता गरे ||महजोडीले १ लाखको पुरस्कार किन फिर्ता गरे ||महजोडीले १ लाखको पुरस्कार किन फिर्ता गरे ||महजोडीले १ लाखको पुरस्कार किन फिर्ता गरे ||
धनकुटामा फेला पर्यो जंगली युगको एक दुलर्भ र प्राचिन घर Ancient Home of the Wild Age
धनकुटामा फेला पर्यो जंगली युगको एक दुलर्भ र प्राचिन घर Ancient Home of the Wild Ageधनकुटामा फेला पर्यो जंगली युगको एक दुलर्भ र प्राचिन घर Ancient Home of the Wild Ageधनकुटामा फेला पर्यो जंगली युगको एक दुलर्भ र प्राचिन घर Ancient Home of the Wild Ageधनकुटामा फेला पर्यो जंगली युगको एक दुलर्भ र प्राचिन घर Ancient Home of the Wild Age
March 1, 2018 admin>
भनिन्छ मान्छे जस्तो सोंचाइ राख्छ उस्तै हुन्छ । त्यसैकारण सोंचाइ जहिले पनि सकारात्मक राख्नु पर्छ । ग्रन्थहरुमा यस्ता ७ ब्यक्ति तथा चिजहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको जसलाई कहिल्यै पनि शंका गर्नु उचित मानिँदैन । नीति श्लोक भन्छः देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरौ। याद्रशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताद्रशी १ तीर्थः तीर्थमा भगवानको बास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । तीर्थमा भक्तहरुको भिड समेत हुन्छ ।यदि तपाइँलाई विश्वास लाग्दैन भने मन्दिर लगायतका तीर्थस्थल नजानुस् तर गैसकेपछि त्यहाँ शंका नगर्नुस् । तीर्थमा गएर अविश्वास गर्नाले तपाइँको पुण्य नाश हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।…
भगवान बुद्धको शिरमा टेकी सेल्फी अनि राष्ट्रीय जनवार गाई काटेर भाग लगाउनेलाई तपाई के भन्नु हुन्छ?पुरा पढ्न र चित्र हेर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस
भगवान बुद्धको शिरमा टेकी सेल्फी अनि राष्ट्रीय जनवार गाई काटेर भाग लगाउनेलाई तपाई के भन्नु हुन्छ?पुरा पढ्न र चित्र हेर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस… तलका दुइवटा चित्र हेर्नुहोस अनि तपाई ऑफै भन्नुहोस के सजाय उचित होला यस्ता दानव रूपी मानवहरूलाई। पहिलो चित्रमा भगवान बुद्धको शिरमा चडेर तस्विर लिएको चित्र छ भने दोस्रोमा हाम्रो राष्ट्रीय जनवार गाई जसलाई हिन्दुहरूले देवता मानेर पुजा गर्छन।गाई काटेर भाग लगाउँदै गरेको चित्र छ। अब भन्नुहोस के यो कार्य सही छ त? किन हामी चुपचाप छौं, कहिले सम्म चुपचाप रहने।दर्पणनेपालको यो एउटा सानो प्रयास हो।जति सक्दो धेरै…